Xeer ilaaliye Bashiir Cabdi Garas oo saaka la aasay, kaddib markii xalay rag hubaysani Galkacyo ku dileen. – Radio Daljir
Xeer ilaaliye Bashiir Cabdi Garas oo saaka la aasay, kaddib markii xalay rag hubaysani Galkacyo ku dileen.
Luulyo 1, 2012 1:37 b 0
Galkacyo, July 01 – Alle ha u naxariistee waxaa saaka qabuuraha magaalada Galkacyo lagu anasaruuray xeer ilaaliyihii gobolka Mudug Garyaqaan Bashiir Cabdi Garas kaddib markii fiidnimadii xalay rag hubsan ay toogasho ku dileen.
Dilka xeer ilaaliyaha ayaa ka dhacay meel u dhaxaysa labada xaafadood ee Israac iyo Hormar ee magaalada Galkacyo, gaar ahaan afaafka hore ee hoteel Mudug, waxaana warar ay tilmaamayaan in ay dilkiisa gaysteen labo nin oo sida la sheegay baskoolada ku hubaysnaa.
Raggii falkaasi gaystay ayaa isla markiiba goobta ka baxsaday, waxaana saraakiil xagga amniga ah oo Radio Daljir la hadlay ay sheegeen in aysan wali ku guulaysan ciddii falkaasi gaystay, hase ahaatee ay hawlan yihiin baaris arrinkaasi la xiriirta.
Aaska maanta waxaa ka qaybgalay mas’uuliyiinta dawladda ee gobolka Mudug, madax dhaqan, mashaa’ikh iyo dadweyne aad u tiro badan, kuwaasi xabaaliddiisa kaddibna rabbi uga baryey in uu naxariistiisa siiyo.
Falka lagu toogtay xeer ilaaliyaha gobolka Mudug ayaa qayb ka ah dhacdooyin ammaan darro oo muddo badan gobolkaasi daashaday, kuwaasi oo ay ku naf-waayeen madax badan oo ka tirsan hay’adaha kala duwan ee dawladda Puntland, odayaasha dhaqanka, aqoon-yahanno iyo hal-door badan oo iskugu jiray qaybaha bulshada ee gobolka Mudug.
Alle ha u naxariistee, xeer ilaaliyaha xalay la dilay ee Garyaqaan Bashiir Cabdi Garas ayaa xilkaasi ayey muddo sannad ka yar, waxaana horay sidaan oo kale loo dilay labo heer ilaaliye oo ka horreeyey kuwaasi oo kale ahaa Alle ha u wada naxariistee Caata Jaamac Nugaal iyo Maxamuud Muuse Timo-jilic oo labaduba ahaa xeer ilaalina guud ee gobolka.
52-sano guuradii kasoo wareegtay midawgii gobollada waqooyi iyo koonfurta Soomaaliya oo laga xusay meelo ka mid ah Soomaaliya.
Ciidamo loogu magac-daray Hiil oo la filayo inay maantay kasoo dagaan Moqdisho, kuwaasoo ka imaanaya Jabbuuti.